N'ihe karịrị 40,000 ikpe COVID ọhụrụ n'ime ụbọchị abụọ India na -arịọ steeti abụọ ka ha wepụta usoro ịlọta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » N'ihe karịrị 40,000 ikpe COVID ọhụrụ n'ime ụbọchị abụọ India na -arịọ steeti abụọ ka ha wepụta usoro ịlọta
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Gọọmentị India rịọrọ steeti Kerala na Maharashtra ka ha tụlee oge mgbochi abalị dị ka ikpe COVID ọhụrụ na -abawanye.
India kọrọ ihe karịrị ọrịa COVID-40,000 ọhụrụ 19 maka ụbọchị abụọ n'usoro n'usoro na Fraịde.
Ọrịa coronavirus ọhụrụ arịala nke ukwuu na India n'ime ụbọchị atọ gara aga.
Kerala emeela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% nke ikpe ọhụrụ n'izu gara aga, yana 16% sochiri na Maharashtra.
Gọọmentị etiti nke India agwala steeti Kerala na Maharashtra ka ha wepụta usoro abalị na mpaghara nwere ọnụọgụ ọrịa coronavirus dị ka India dekọrọ ihe karịrị 40,000 COVID-19 ọhụrụ maka ụbọchị abụọ n'usoro taa.
Okwu ikpe Coronavirus belatara ruo ọnwa ise dị ala nke 5 n'etiti August mana ebiliwo nke ukwuu n'ime ụbọchị atọ gara aga, ọkachasị na Kerala nke mere nnukwu ememme n'oge ezinụlọ na-ezukọkarị.
India kọrọ 44,658 ọrịa COVID-19 ọhụrụ na Fraịde, na-ewe mkpokọta ya ruru nde 32.6, nke kachasị na ụwa mgbe United States gasịrị. Ọnwụ bilitere site na 496 ruo 436,861.
Kerala, na nsọtụ ndịda India, agbagoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 60 nke ikpe ọhụrụ n'izu gara aga yana ihe karịrị ọkara nke ikpe na -arụ ọrụ, yana pasent 16 sochiri na steeti ọdịda anyanwụ nke Maharashtra.
"A ga -achọkwu mbọ iji jide mmụba nke ọrịa." ministri ime ụlọ nke etiti kwuru na nkwupụta na mgbede Tọzdee mgbe odeakwụkwọ ya na steeti abụọ ahụ nwere nzukọ, mgbe a gwara Kerala na Maharashtra ka ha "chọpụta ohere itinye mgbede abalị na mpaghara oke ịdị mma".
Onye ozi ahụ kwukwara na a ga-ezigakwu ọgwụ mgbochi COVID-19 na steeti abụọ ahụ.
India ka na -enye ihe karịrị nde ọgwụ mgbochi 611, na -enye opekata mpe otu ọkara ihe karịrị nde 944 okenye yana ọgwụ abụọ a chọrọ n'ihe dị ka pasent 15.